सिद्धार्थ म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत सञ्चालित दुवै योजनाको प्रतिइकाई खुद मूल्य बढ्यो
मंसिर १२, काठमाडौं । सिद्धार्थ म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत सञ्चालित दुवै योजनाको प्रतिइकाई खुद मूल्यमा वृद्धि भएको छ । सिद्धार्थ इन्भेष्टमेण्ट ग्रोथ स्किम २ र सिद्धार्थ इक्विटीफण्डको प्रतिइकाई खुद मूल्य बढेको हो ।
सिद्धार्थ इन्भेष्टमेण्ट ग्रोथ स्किम २ को असोज मसान्तसम्ममा प्रतिइकाई खुद मूल्य रू. ११ दशमलव ४९ रहेकोमा कात्तिक मसान्तसम्ममा रू. १२ दशमलव १९ पुगेको हो ।
त्यसैगरी, सिद्धार्थ इक्विटी फण्डको कात्तिक मसान्तसम्म प्रतिइकाई खुद मूल्य रू. १२ दशमलव २८ पुगेको छ । यो मूल्य असोज मसान्तमा रू. ११ दशमलव ५६ थियो । कात्तिक मसान्तसम्म दुवै योजनाको प्रतिइकाई खुद मूल्य बढेसँगै नाफा पनि बढेको छ ।
सिद्धार्थ इक्विटी फण्डले असोज मसान्तसम्म रू. १९ करोड १२ लाख ५३ हजार नाफा कमाएकोमा कात्तिक मसान्तसम्म वृद्धि भएर रू. २९ करोड ९४ लाख ५१ हजार पुगेको हो । त्यसैगरी, सिद्धार्थ इन्भेष्टमेण्ट ग्रोथ स्किम २ ले कात्तिक मसान्तसम्म रू. १९ करोड ३७ लाख ७२ हजार नाफा कमाएको छ । यस योजनाले असोज मसान्तसम्ममा रू. १० करोड ९१ लाख ७५ हजार नाफा कमाएको थियो ।
कात्तिक मसान्तमा दुवै योजनाको लगानीको लागत मूल्यभन्दा बजार मूल्यमा बढी रहेको छ । सिद्धार्थ इक्विटी फण्डले कात्तिक मसान्तसम्म सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेञ्चर तथा मुद्धति निक्षेपमा भएको लगानीको लागत मूल्य रू. १ अर्ब १० करोड ४८ लाख २२ हजार रहेकोमा यसको बजार मूल्य रू. १ अर्ब ३३ करोड ४२ लाख ४३ हजार रहेको छ ।
त्यसैगरी सिद्धार्थ इन्भेष्टमेण्ट ग्रोथ स्किम २ ले कात्तिक मसान्तसम्म सूचीकत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेञ्चर तथा मुद्धति निक्षेपमा भएको लगानीको लागत मूल्य रू. ८५ करोड ६ लाख १६ हजार रहेकोमा यसको बजार मूल्य रू. १ अर्ब ३ करोड ४३ लाख पुगेको छ । कात्तिक मसान्त सम्ममा दुवै योजनाले लगानी गरेको कम्पनीहरुको शेयर मूल्यमा बढेसँगै नाफा सँगै प्रतिइकाई खुद मूल्यमा वृद्धि भएको हो ।
तेस्रो घण्टामा ८.४५ अंकले बढ्यो बजार, कारोबार रकम ४ अर्ब १६ करोड (२ बजेको अपडेट)[२०७७ माघ, ७]
चन्द्रागिरी हिल्सको आईपीओ प्रि- अलोेटमेन्ट आज हुँदै[२०७७ माघ, ७]
१.५१ अंकले बढेको बजारमा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको सर्वाधिक कारोबार (१ बजेको अपडेट)[२०७७ माघ, ७]